> Resource > Beddelaan > Sida loo Beddelaan DV in MP4
Mararka qaarkood ma waxaad ka daawan kartaa DV videos aad ka camera digital aad telefoonada gacanta, PSP, ama u geliyaan in YouTube la wadaagga kuwa kale. Xaaladdan oo kale, waxaad u baahan doontaa si loogu badalo DV in MP4, qaab inta badan la isticmaalo inta badan ciyaartoyda video, telefoonada gacanta iyo internetka. Maqaalkani waxa aad ku talin doonaa video Converter Aamin ah iyo dareen si ay kuu caawiyaan. Uma baahnid tababar farsamo kasta oo ay bilowdo inay badalo DV in MP4 dadaal lahayn.
Qeybta 1: Best DV in Converter MP4
Qeybta 2: DV Free in Converter MP4
Qeybta 3: DV Online in Converter MP4
Qeybta 4: Aqoonta la wadaago (DV vs MP4)
Qeybta 1: Best DV in Converter MP4 for Windows / Mac (El Capitan ka mid ah)
• Beddelaan videos ka qaabab kala duwan si ay AVI, MP4, MKV, MOV, iyo in ka badan.
• Beddelaan video si toos ah telefoonada gacanta, iMovie, Pro Goo Final, PSP, Madaxweyne Siilaanyo, iwm
• Gubashada video inay DVD la badan dhisay-in arrimo DVD menu.
• Ku dar metadata kasta oo macmal ah video, bandhigyada TV iyo filimada.
• Work ee 30X xawaaraha ugu dhaqsiyaha badan si ay u sameeyaan wax walba oo fudud.
Sida loo badalo DV in MP4
Just hesho tilmaan kooban ka hooseeya si ay u bartaan sida loo badalo DV in MP4 for Windows (Windows 10 ka mid ah). Haddii aad tahay user Mac ah, fadlan riix halkan si aad u barato sida loo badalo DV in MP4 for Mac (Yosemite ka mid ah).
1. DV Load files si DV in ay MP4 video Converter
Guji "Add Files" icon ku darto files DV aad ka desktop fayl kale. Ama si fudud u jiidi faylasha DV si toos ah u furmo suuqa barnaamijka.
In ka "Output Qaabka" Murayaad in guji qaab icon, ka "qaab"> "Video" sida qaab wax soo saarka, haddii aad file asalka ah waa in tayada HD, waxaad sidoo kale u tagi kartaa "qaab"> "HD" category dooran MP4 > "MP4 HD".
Waxa kale oo aad si toos ah uga "Device" category sida wax soo saarka, tusaale ahaan iPod, iPad, iPhone, PSP, HTC, telefoonada Android, iwm dhigay kartaa qalab saxda ah aad
Talooyin: DV ayaa si MP4 Video Converter intaa bixisaa qaar ka mid ah hawlaha edit waxtar leh oo aad u awood si kor loogu qaado clips video ah, oo ay ku jiraan abuurka, falinjeeerka, qaybsama, dalban saamaynta gaar ah, ku dar subtitles iyo watermark. Si aad u hesho suuqa kala edit ah, fadlan tag "Edit" in bar menu iyo dooranayaan.
3. Start DV in ay diinta ka MP4
Press "badalo" badhanka si ay u bilaabaan DV in ay diinta ka MP4. Barnaamijkan waxa aad u hufan, iyo bar horumarka idin tusin doonaa boqolkiiba iyo waqtiga soo hadhay.
Sida loo Converter DV in MP4 for Windows (Windows 10 ka mid ah)
# 1. Free Video Converter: Wondershare DV Free in Converter MP4
Soo qaado tan Free DV in MP4 video Converter si loogu badalo DV in MP4 for free. Waxa kale oo aad isticmaali karto si aad ka soo dejisan YouTube videos iyo shakhsiyeeyo videos.
Pro: Free, fududahay in la isticmaalo
1. Waxa kaliya ee ay taageertaa diinta caadi videos, 3D iyo HD video ma taageersana.
2. Waxa aanu lahayn presets filaayo in telefoonada gacanta, telefishin ama qalabka ciyaarta.
3. Waxaad guban kara video inay DVD.
4. The tayada wax soo saarka video ma u fiican yahay sida video Converter kama dambaysta ah.
DV waa qaab diiwaangelin, oo waxay dib ugu ciyaaro video digital. Waxa la bilaabay 1995, oo ay ku jiraan DVCam, DVCPro, DV iyo cajalado DV mini. Maalmahan, DV ayaa qaar badan oo ka caan ah. Dadka isticmaali kartaa DV ah in ay qaataan videos for ciidaha xisbiga ama waxaa laga yaabaa, sameeyo filimada qoyska iyo qaato videos inta lagu jiro safarka. Si ay iyaga wax ka bedel u rara online for qaybsiga, waxaad si fudud iyaga edit karaa iyadoo iMovie, Final Cut Pro ama Adobe jilitaankii.
MP4 waa kordhinta file offical ah MPEG-4 Qaybta 14, heer qaab weel multimedia si gaar ah qayb ka mid ah MPEG-4. Waxaa keydin karaa video digital iyo durdurrada audio digital, gaar ahaan kuwa ku qeexan MPEG, laakiin sidoo kale macluumaadka kale sida subtitles oo weli sawirada. inta ay le'eg file yar ka dhigayaa caan ah. Hadda waxaan videos soo bixi badan ama dhacdooyin TV iman karo in MP4 kordhin. Waxaa helo taageero ballaadhan ka kombiyuutarada labada Mac iyo nidaamka Windows, iyo ciyaaryahan warbaahinta la qaadi karo, sida iPod, iPhone, PSP, Archos, Zune, iRiver, iyo qalabka kale.